7-da Magaalo Ee Ugu Fiican Africa Dhanka Ganagsiga 2015 - Daryeel Magazine
7-da Magaalo Ee Ugu Fiican Africa Dhanka Ganagsiga 2015
Wax soo saarka Nayjeeriya ayaa soo koraayey tan iyo 2012 kii iyada oo dhamaadkii sanadkii hore lagu qiyaasay xadiga wax soo saarka ee dalka Nayjeeriya ku dhawaad 594.3 Billion oo dollar.
Cilmibaadhis badan oo lagu sameeyey ayaa sheegaysa in uu kordhaayo dhaqaalaha dalkaasi 7.3 boqolkiiba 2015 ka qudhiisa.
Hadaba caasimadii hore ee dalkan Nayjeeriya oo ah dalka ugu tirada badanqaarada Afrika ee lagos ayaa ah magaalo si magaalo si aad ah u soo jiidanaysa dadka ajaanibka ah ee aad ka u daneeya in ay maal gashadaan dalka Nayjeeriya.
Goobta istaraatiijiga ah ee ay ku taalo iyo bulshada aadka u faraha badan ee ku dhaqan lagos ayaa loo aaneeyaa in ay Lagos noqoto magaalada Afirka ugu horraysa xagga dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo maal-gashiga shisheeye.
Lagos ahaa xarun u ah ganacsi badan iyo hudheelo raaxo intaa waxaa u dheer jariisada Victoria oo hoy u ah ganacsatada reer Nayjeeriya .
Caasimada dhaqaalaha ee dalka Ivory coast waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu wayn ee ku hadla afka Faransiiska kuna yaala qaarada Afrika.
Magaaladan ayaa ku talaabsatay koboc dhaqaale oo wax ku oon al,kadib 10 sano oo xasilooni daro siyaasareed ka taagnayd.
Abidjan ayaa xarun u ah Bangiga horumarka ee Africa,suuqa iswaydaarsiga saamiyada ee Abidjan iyo dhismaha Biriijka wayn ee Henri Konan ayaa qayb-libaax ka qaatay in ay korodho tirada bulshada ku nool magaaladan.
Hadaba dalka Ivory coast ayaa ku guulaystay in uu kordho dhaqaale sanadeedka ruux kasta oo dalka u dhashay,waxaana la saadaalinayaa in uu sii kordho dhaqaale shaqasiyeedka sanadlaha ah ee dadlka reer Ivory Coast boqolkiiba 7.9 sanadkan 2015 ka.
waxa ay ka dhex muuqataa ganacsiga Afirka. waxaana la ogyahay in ay tahay magaaladii ugu horraysay ee maal gashi ka bilawda bartamaha iyo galbeedka Afirka.
Heshiisyo ku saabsan wada shayn dhinaca xirfadaha,ilbaxnimada iyo heshiisyo ganacsi ayaa ku badhi-taaray magaaladan in ay Morocco ka dhigto wadanka labaad ee Afrikaan ah ee saldhig u ah jihaynta maal gashida shisheeye,waxaa ka horeeya uun wadanka Koonfur Afrika.
waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu balaadhan dalka koonfur Afirka waana magaalada 3aad ee qaarada Afriak,waana magaalada 3aad ee qaarada Afirka ugu dadka badan.waxaa ka horaysa uun caasimda Masar ee Qahira iyo magaalada Lagos ee Nigeia.
Dawlada koonfur Afrika oo wax wayn ka qabatay dhinaca nabad galyada magaaladan iyo horumarin wayn oo ay ku samaysay dhismayaasha halbawlaha ah ayaa ka dhigtay magaalo la ciirciiraysa dhaqaale isku filan.
Waa magaalo qaadikarta mawjado ah maal-gashi caalamiya,intaa waxa u dheer warshadaha awooda leh ee ku yaal iyo dhaqaalah sida wacan u kobcaaya.
Waa caasimada Wadanka Kenya,waana magaalada dalka ugu balaadhan caasimada aah caan ku ahayn dalxiiska oo kaliya,lakiin intaa waxaa u dheer in ay tahay goob uu ka hanaqaaday ganacsi aad u firfircoon.
Sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2014 ayaa lagu qiyaasay wax soosaarka Kenya 62.7 bilyan oo Dollar waxaana la odorosay in uu kor u sii kaco boqolkiiba 6.2 sanadkan 2015 ka Kenya waxa ay ku taalaa bariga Afrika.
Hadaba Nairobi waxa ay saldhig u tahay laba ganacsi oo aad u baaxad wayn oo kala ah,ganacsiga qalaad iyo kan maxaliga ah.
Baanka ganaciga ee Nairobi ayaa lagu tilmaamaa kan ugu wayn mandiqada.Sidoo kale waa ay xarun u tahay in badan oo ka mid ah bangiyada iyo shirkadaha caalamiga ah,shirkada diyaaradaha ee Kenyan Airways ayaa iyana qayb libaax ka qaadatay in Nariobi noqoto saldhig wayn oo Afrikaan ah
Waa caasimada wadanka Ethiopia waxa ay na ku taalaa good istaraatiiji ah badanaana waxaa loo tixgaliyaa in ay tahay caasimada siyaasada ee Afrika waa xarunta midawga Afrika.
Mashruuca tareedana dheereeya ee ka hirgalay Adis Ababa waxa uu marag madoon u yey in ay qayrkeed ka dheeraysay.sandkii hore ayaa lagu qiyaasay wax soosaarka wadanka Ethiopia ku dhawaad 49.9 bilyan oo dollar,iyada oo ay saadaashu tilmaantay in uu kordhidoono 8.5 sanadkan gudihiisa.Ethiopia waa wadanka kaliya ee Afrinaan ah ee ay ku yaalaan tobonka good dalxiiseed ee ugu wanaagsan sanadkan 2015 ka.
Waa caadimada Wadanka Uganda,waxaa ku nool ku dhawaad in ka badan 2 milyan oo qof waana magaalada dalka ugu balaadhan waxaa lagu tilmaamaa “Jawharada Afrika”Saliida ku duugan Uganda oo la helay sanadkii 2006 dii ayaa dhiiri galiyey maalgashiga,waaxda dalxiiska ayaa ahayd isha ugu wayn ee xaga dhalaale abuurka intii u dhaxaysay 2013 ilaa 2015.
Wax soosaarka Uganda ayaa si wayn usoo kobcaayey laga soo bilaabo sanadkii 2012 kii iyada lagu qiyaasay in uu kurodho sanadkan 2015 ka boqolkiiba 6.3 si uu u cagacageeyo ilaa 26.9 bilyan oo dollar.Habada su’aashu waxa ay tahay maxay wadaagaan magaalooyinkani?
A: Baaxada dhulka ay ku fadhiyaan iyo barta a ku yaalaan si waca usoo jiidanaysa malgashadayaasha
B:Tirada dadka ku nool magaalooyinkan oo aad u badan
Sida Ugu Fiican Ee Aad Ku Garan Karto In Ilmahaaga Uu Hayo Madax Xanuunka Dhan-Jafka Ah Hababka Ugu Fiican Ee La Iskugu Diyaariyo Imtixaanaadka Darajo Sarena Loo Keeno Waqtiyada Ugu Fiican In Bunka La Cabo Tobanka Laptop Ee Ugu Batariga Fiican 2016